Tirada Dhimashada qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho oo gaartay 70 qof - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTirada Dhimashada qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho oo gaartay 70 qof
December 28, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Qaraxa ayaa lala sheegay in lala beegsaday xarun canshuurta lagu uruuriyo. [Isha Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Tirada Dhimashada qarax gaari oo Subaxnimadii Sabtida ka dhacay Muqdisho ayaa gaartay 70 qof, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Qaraxa ayaa lala beegsaday xarun ay booliiska ku uruuriyaan canshuuraha oo kutaala isgoyska Ex-kantarool ee gudaha Muqdisho.
Ku dhawaad 90 qof oo kale ayaa ku dhawaacantay qaraxa, kuwaasoo la geeyay xarumaha caafimaadka ee Muqdisho.
Dadka qaraxa ku waxyeeloobay waxaa kamid ah arday kadib markii gaarigii ay saarnaayeen uu qabsad weerarku.
Labo nin oo u dhashay dalka Turkiga ayaa ku jira dadka ku dhintay qaraxa, sida ay ku warantay wakaalada wararka Turkiga Anadolu, oo soo xiganaysa masuuliyiinta dalkaas.
Boosaaso-(Puntland Mirror) Dooni ganacsi oo sida badeeco gaareysa 1500 tan ayaa macquul ay tahay in ku degto Badda Cas ee Boosaaso kadib markii masuuliyiinta dekada Boosaaso ay diideen in ay ku soo xirato dekada, sida [...]